Ny sivana sy filokana nataon'i Apple dia napetraka ao amin'ny Lemak'i Gaza | Avy amin'ny mac aho
Laura varo | | Apple, About us
La politika momba ny fiainana manokana sy atiny ao amin'ny App Store sy amin'ny iTunes dia tena manokana miaraka amin'ny karazana atiny azo avoaka ho an'ny sehatra fivarotana an'i Apple ary ny sivana mety hitranga. Miezaka ny orinasa hanolotra fangatahana kalitao a atiny tompon'andraikitra mety amin'ny mpihaino rehetra, noho izany ny fanaraha-maso ny asa farany ataon'ny mpamorona dia tsy maintsy mahafeno fepetra takiana mba hisehoan'ny mpampiasa.
Liyla sy ny aloky ny ady dia lalao sehatra indie izay, raha ny filazan'ireo tompon'andraikitra amin'ny fandinihana ny atiny dia tsy mahafeno ny fepetra takiana aminy vesatra politika be, ka i Apple no nanapa-kevitra tamin'ny voalohany mandrara ity lalao ity ho an'ny sehatrao. Taorian'ny fanambarana ny Rasheed Abueideh, mpamorona ny lalao mampiady hevitra, ny an'ny Cupertino dia nanaiky hahafahan'ny mpampiasa iOS manana an'i Liyla sy ny aloky ny ady.
Fepetra sy fepetra apetrak'i Apple hisorohana ny sivana
Amin'ny fehezan-dalàna sy fepetra Apple, ny orinasa dia maneho fa na izany na tsy izany dia mety tafiditra ao ireo fampiharana herisetra na fanararaotana zaza tsy ampy taona, manolotra atiny tsy mahafinaritra na misy fitaovana vetaveta. Amin'ny raharaham-pivavahana dia mamaritra izy fa «Fampiharana izay misy fanamarihana na fanamarihana manendrikendrika, manafintohina na manafintohina ireo antokom-pinoana, kolotsaina na foko, na mety hampiharihary ny vondrona kendrena fahavoazana ara-batana na herisetra«, Ary ireo lahatsoratra ara-pinoana ireo dia tokony hampahafantatra na fanabeazana fa tsy fihantsiana.
Liyla sy ny aloky ny ady dia kintana vehivavy tsy maintsy hialanao ny baomba tany amin'ny sahan'i Gaza. Ao amin'ny famaritana ny lalao nohazavain'i Apple ny vesatra politika voarohirohy ao anaty teti-dratsy, amin'ny fiheverana fa tokony ho sokajiana tsara kokoa ho vaovao fa tsy lalao.
“Rehefa monina ao amin'ny faritra misy ady ianao ary manenjika ny olona rehetra ny fahafatesana dia tsy mitovy ny zavatra ary sarotra kokoa ny manapa-kevitra. Atreho amin'ny ady tsy rariny ny anjaranao ary miaina miaraka amin'ny fianakavianao ao anaty aloky ny ady. Efa kely sisa ny fotoana ary tandindomin-doza ny fianakavianao. Tsy misy toerana hiafenana na zavatra hafa tokony hatao afa-tsy ny famoahana azy ireo hiala ny tranony sy amin'ny fiarovana amin'ny alàlan'ny dia maherifo iray.
Liyla sy ny aloky ny ady, izay misy hatramin'ny namoahana azy ho an'ny Android amin'ny Google Play, azo sintonina ho an'ny iOS izao amin'ny iPhone sy iPad avy amin'ny iTunes Store.
Liyla sy ny aloky ny adymaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny sivana sy filokana nataon'i Apple dia napetraka ao amin'ny Lemak'i Gaza